अनमोलको जवाफमा कती छ दम ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsअनमोलको जवाफमा कती छ दम ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- अभिनेता अनमोल केसी पत्रकारसँग साक्षात्कार गर्न कती सिपालु ? अभिनेता केसी नेपाली फिल्म क्षेत्रमा चकलेटी हिरो भएर मात्र चलेका छन् या बोल्न पनि जानेर ?
अभिनेता केसीको संचारमाध्यममा आउने कुराकानीमा उनको सभ्य र मधुर बोलीले उनका फ्यानलाई तानेको छ । अभिनेता केसीको बोल्ने शैलीको त धेरै फ्यान पनि छन् । तर, अभिनेता केसीले दिने जवाफ कस्तो हुन्छ ?
अभिनेता केसी अभिनित सिनेमा क्याप्टेनको ट्रेलर रिलिजमा उनले देखाएको हाउभाउ र उनले दिएको जवाफको बारेमा चर्चा गरौ । केसीलाई पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए, तपाइले आफूले छाडेको भूमिका अरु हिरोले गरुन् भनेर नाम नै लिदा उनीहरुको अपमान भएन र ?
यसमा अभिनेता केसीले पहिले ध्यान दिएर प्रश्न सुने र जवाफ दिए । जवाफ दिने क्रममा उनले यसमा आफूले कुनै पनि खालको अपमान नगरेको जवाफ दिए । बरु उनले आनी छोइङ डोल्माको आवाजमा रहेको फूलको आँखामा फूलै संसार बोलको गीत सुनाए । उनले, आफूले नाम लिएकोमा पनि कुनै पछुतो नलागेको बताए । अभिनेताले यो जवाफ दिदै गर्दा पत्रकारहरुले ताली पिटे ।
अभिनेता केसीले सिनेमाको प्रमोट गर्न पनि सिकिसकेका छन् । सिनेमा क्याप्टेनमा अभिनेता केसीले फुटबल खेलाडीको भूमिकामा काम गरेका छन् । जहाँ, उनले अन्तिम समयमा भारतसँगको खेल जित्नुपर्ने हुन्छ र गोल्ड मेडल ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अभिनेता केसीले यसमा पनि राष्ट्रियताको भाव झल्कने जवाफ दिए । उनले, भारतले नेपाललाई हेपेको प्रतिक्रिया दिए । यतिमात्र होइन, उनले सिनेमाले राष्ट्रियताको कथालाई उठान गरेको बताएका छन् ।
अभिनेता केसीले सिनेमा रिलिज नजिक भएको बिषयमा पनि जवाफ दिए । उनको ए मेरो हजुर ३ सिनेमा क्याप्टेन रिलिज भएको करिब डेढ महिनापछि रिलिज हुँदैछ ।
अभिनेता केसीले यो बिषयमा भने, मेरो जुन सिनेमा आएतापनि दर्शकका लागि केही फरक होस् भन्ने चाहन्छु । सिनेमा नजिक आएपनि कथा फरक हुनेछ ।
अभिनेता केसीले सिनेमा जुध्ने बिषयमा पनि बोलेका छन् । तर, उनले कुनै पनि सिनेमाको नाम नै नलिई नेपाली फिल्मसँग आफ्नो प्रतिस्पर्धा नभएको बताए । अनमोलले आफूहरुको प्रतिस्पर्धी विदेशी सिनेमा भएको भन्दै नेपाली सिनेमाविच प्रतिस्पर्धा नहुने बताए । बरु, उनले सबै सिनेमकर्मी एउटा परिवार भएको बताएका छन् ।
सिनेमामा अभिनेता केसीले मदिरा पिएको दृश्य । वास्तविक जीवनमा पनि अनमोलले मदिरा पिएका छैनन् । तर, उनले यो सिनेमामा मदिरा पिएको दृश्य देखाइएको छ । अनमोलले आफू स्वास्थ्यको हिसाबमा सधै नै सजग रहेको बताए । यसैले सिनेमामा पानी मिसाएर खाएको अनमोलले बताएका छन् ।
अभिनेता अनमोल केसीले सधै नै पत्रकारसँग खुलेर र मिलाएर जवाफ दिने गरेका छन् । उनको यही जवाफ दिने तरिकाले उनलाई अहिले स्टार बनाइरहेको छ ।
laates celebrity gossip
अनमोल भन्छन :’मैले प्रदिप,पल र सलिमानको अपमान गरेको हैन’